🥇 ▷ Tilmaamo wanaagsan: koofiyadda Bose QC 35 ee dayrta bilaashka ah ee Fnac ✅
Tilmaamo wanaagsan: koofiyadda Bose QC 35 ee dayrta bilaashka ah ee Fnac
Munaasabadda “6 maalmood oo ay mashaariicdaada ka dhigeyso mid run ah”, xarunta Fnac waxay abaabushaa iibyo toos ah oo taxane ah oo ku saabsan badeecooyinka ugu caansan xilligan. Mashiinka Bose QuietComfort 35 (QC 35) waa mid ka mid ah rajada weyn ee dhacdadan tan iyo markii ay aragto sicirkeeda inuu hoos u dhacay wax ka badan 35% marka loo eego qiimahiisa asalka ah. Tixraac dhab ah oo ku saabsan suuqa madax-is-weydaarsiga wireless-ka, aaladani waxay lumineysaa 160 € iyadoo loo sii marinayo adeeggan Flash ah.
Si aad u hesho qorshaha saxda ah ee ‘Bose QC 35’, halkan waa:
Heerka lagu soo bandhigay goobta Fnac waa mid ka mid ah kuwa ugu tartamaya (haddii aysan ahayn kuwa ugu tartamaya) ee aan waligeen aragnay illaa iyo hadda. Koofiyadda Bose QC 35 waa miisaan culus oo dhab ah suuqa, waa mid aad loo jecel yahay. Looma baahna in la sheego, qiimahaan, nuqulada ayaa laga yaabaa inay ku baxaan xawaare buuxa. Haddii aadan dooneynin inaad lumiso fursad weyn oo aad ku keydsato lacag aad u wanaagsan oo aad ku wanaagsan tahay madaxa dhegaha ee Bluetooth, waa inaad hadda u baxdo arrintaas.
Waa maxay sababta loo qaato koofiyadda Bose QC 35?
Koofiyadda Bose QC 35 ayaa maqneyd dhowr sano, laakiin weli ma aysan dhicin. Xitaa aaladda cusub ee Bose ee loogu talagalay in lagu beddelo (Headphones 700) ma aha sida loo jecel yahay. Muxuu caan ku yahay? Sababta oo ah waxay bixisaa dhawaq tayo sare leh oo leh nidaam dhimis wax ku ool ah oo kuu oggolaanaya inaad runtii naftaada ka go’do hareerahaaga. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay gaadiidka dadweynaha.
Taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah waxay leeyihiin nolol batari ah 20 saacadood, taas oo kuu oggolaaneysa inaad sameyso safaro dhaadheer adigoon ka walwalayn batterigiisa. Waxaa dib ugu buuxiya fiilo koronto ah oo leh 3.5 mm jaakad yar oo laga heli karo labada dhinac midkood. Daqiiqado gudahood, waxay dib u soo ceshataa madax-bannaanideeda, oo runtii weyn. Ku dhawaad ​​isticmaalka maalinlaha ah (ha ahaato shaqada ama gaadiidka dadweynaha), aalada Bose QC 35 ee sameecadaha Bluetooth waa runti aad u fiican. In kasta oo ay le’eg tahay oo u muuqan kara mid wax ku ool ah, haddana ma u oggolaaneyso in nafteeda lagu maqlo dhagaha.
Fnac wuxuu hoos u dhigaa qiimaha dhammaan Bose
Haddii Bose QC 35-ka taleefoonnada ay duubto hoos udhaca ugu weyn (-40%), Fnac wuxuu go’aansaday inuu ku bixiyo qiimo jaban dhammaan noocyada takhasuska maqalka ee Mareykanka. Sidaa darteed waxaa jira qiyaas ahaan 15% hoos udhigista dhammaan alaabooyinkeeda, ha ahaato kuwa sameecadaha bilaa-waayirka ah ama qalabka dhegaha la gashado iyo kuwa ku hadla ama la qaadi karo. Waxaan kugu casuumeynaa inaad fiiriso goobta baayacmushtarka si aad u ogaato dhamaan talooyinka waa weyn ee maalintan ugu horeysa ee “6da maalmood si aad uga dhigto mashaariicdaada mid dhab ah”.
Howlgalkan ayaa si rasmi ah u bilaabanaya subaxnimadii Arbacada, marka ha filanin qaybaha ugu caansan – sida koofiyaddan Bose QC 35 – in la iibinayo muddo aad u dheer. Sidaa darteed waxay noqon doontaa lagama maarmaan in si weyn loo daneysto in la qabto unugyada kooban ee lagu iibiyo iib qiimo jaban. Tusaale ahaan, madax-dhaqameedyadan wireless-ka ah iyo kuwa dhawaaqa joojinaya ayaa ka qiimo yar kuwii hore ee AirPods Pro (€ 279) kaasoo soo baxay dhammaadka 2019. Hase yeeshee runtii isbarbardhig maayaan maadaama kuwa dambe ay yihiin dhagaha-dhagaha dhegta. Qofka raba inuu ku raaxeysto dhawaaqa is dhexgalka, Bose Bluetooth headset ayaa ah xalka ugu fiican.
Markaad ka iibsato koofiyadda Bose QC 35 ee Fnac, waxaad ka faa’iideysaneysaa dhowr faa iido. Marka hore, waxaad xaq u leedahay inaad ku soo celiso waxa aad iibsatay 15 maalmood gudahood (taariikhda keenista caddeyn ahaan) haddii aadan ku qanacsanayn badeecada. Ganacsade Faransiis ayaa markaa ku raacsan inuu kuu celiyo lacagtii aad iibsatay oo dhan. Faa’iidada labaad ayaa ah inaad sidoo kale heli doonto 4 bilood oo bilaash ah Deezer Premium. Si kale haddii loo dhigo, oo leh madax-is-weydaarsigan wireless-ka ah, waxaad heli doontaa dhammaystir kaamil ah oo aad ku raaxaysan karto muusik aan xadidnayn (oo ay ku jiraan khadka tooska ah).
Ugu dambeyntiina, faa iidada ugu dambeysa waa mar labaad qiimaha, maadaama aad ku badbaadin karto 35% taleefoonnada Bose QC 35-ka. Qiimaha lacagta ayaa noqda mid aan la adkeyn karin, runtii waa fursad dheeraad ah oo lagu awoodo in lagu helo qiimo dhan 249 euro oo keliya. Mar labaad, waa inaad noqotaa mid aad u xiiso badan, mana noqon doonto wax lala yaabo in la arko saamiyada oo dhammaanaya saacado yar uun ka dib.
Si loo ogaado qorshaha wanaagsan ee ‘Bose’ ee Fnac, halkan waa:
Qodobka ay soo qabanqaabisay shirkadda Fnac